काठमाडौंको नयाँ बसपार्क आकाशे पुलका दुई बहिनी - "जाने हो दाई ? लाने हो दाई" ? - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : आइतबार, पुष १५, २०७५१९:१५ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
सहयोग गरिराख्नु भएको एक जना ट्राफिक दाई । आँहा सच्चिकै रमाइरहेको थिए म । तर आकाशे पुलमा कोही कोही हत्तारीदै पाताल नै नहेरी ट्रिपर झै घुइकीएका मान्छहरु ठोकिन्थे उभिरहेको ‘म’ संग । आकाशे पुलमा पनि मान्छेको चाप बढ्दै गइरहेको थियो । सामान बेच्नहरु पनि थिए ‘महिला पुरुष बराबरी’ ,यहाँ निर लाग्यो महिला पुरुष बराबर भन्ने नाराले सार्थकता पाएको ।
‘म’ उभिरहेको थिए दाईको बाटो हेर्दै । अघि बाट एकटहले हेरीरहेकी एक युवती अलिकती मुस्कुराईन म अक्क न बक्क भए । मैले ति युवतीलाई कहिले देखेको थिइन , मेरो मानसपटलले भ्याए सम्म ठम्याउने प्रयास गरे जुन विफल भयो । फेरि हाम्रो तीर चिनेको मान्छे मात्रै यसरी भेटहुँदा मुस्कुराउँथे । म अचम्मित भइरहेको थिए ।
सुनेको थिए काठमाडौंमा यस्तो हुन्छ तर स्वर्गको बारेमा सुन्नु र जानुको फरक बुझे । अनि सोधे ५ हजार तपाइले मलाई किन दिने ? उनी झोक्किएर बोलिन कस्तो आँपे होला ? नाटक नगर्नु आज एउटा नी ग्राहक भेटेको छैन् । जाउँन दाई बरु पैसा मिलाउछु अलि । प्रहरीको डर हुन्न एकदम सेभ ठाउँ हो । केहि नसोधेको मलाई उनले आफै सबै कुरा बताइन । गाँउमा हुँदा बहिनीहरुले जाउ भनेको नसुनेको हैन् तर की त कतै घुम्न गएको बेला साझ हुँदा घर जाँउ भन्थे , कि त स्कुल जाउँ भन्थे एक पटक त तल्लो घरे बहिनीले छिमेकीको काक्रो चोर्न जाउँ भनेको सम्म सुनेको बिचारा म यी आकाशे बहिनीको ताल देखेर आफै बेताल भइसकेको थिए । अनि सोचे काठमाडौं भन्या काठमाडौं हो । यहाँ जे पनि हुन्छ दाईको नाता लागाएर यौन व्यवसाय समेत । साच्चिकै भन्ने हो भने काठमाडौंका पाँच हजार वाला बहिनीले सबै भन्दा पवित्र नाता सम्बन्धको बलात्कार गरेका छन् ।
रास्ट्रपतिको रत्नपार्कमा बसेर डालोमा बदाम बेच्ने जति नि औकात छैन : ज्वाला सङ्ग्रौला
हुबहु किताब घोक्दैमा र धेरै लेख्दैमा लोकसेवा पास भइँदैन , जानि राख्नुहोस सुत्रहरु !